XBMC eyi-Android | Kusuka kuLinux
XBMC eyihlane ye-Android
Isikhathi | | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngemuva kokufaka I-XBMC ku Ukusajingijolo Pi kokwami ​​kwangaphambilini ukungena, manje ngizochaza ukuthi ngiyiphatha kanjani. Kunezindlela ezimbili:
Okokuqala nokulula ukuyilawula ngesilawuli kude sethelevishini, ngoba lokhu ithelevishini yakho kufanele ikusekele I-HDMI-CEC. Okwesibili ukusebenzisa izinhlelo eziphatha i- I-XBMC. Ngizochaza ukuthi ungamisa kanjani Isilawuli kude se-XBMC ye-Android
Sizokwenza abaphathi be- I-XBMC, kulokhu kumele siye "ideski" de I-XBMC bese uthuthela ku Uhlelo >> Izilungiselelo >> Izinsizakalo >> Iseva yeWebhu. Manje kufanele ukhombise igama lomsebenzisi nephasiwedi yeseva yewebhu, kimi ngikhethe:
Sesiqedile ngengxenye ye- I-XBMC. Manje sifaka uhlelo lokusebenza Isilawuli kude se-XBMC ku-Android yethu bese uyisebenzisa. Isikhathi sokuqala lapho sizobona lokhu:
Siya kuzilungiselelo bese sivale isaziso esibonisa ukuthi ayikho Bamba. Sivela esikrinini esimnyama lapho kufanele sengeze khona i- Bamba ngokucindezela ukhiye wemenyu we-Android yethu.
Sizothola isikrini lapho kufanele siqedele khona idatha:
Igama lalesi sibonelo: Okusajingijolo # Lapha ungabeka igama olifunayo
Ikheli lokusingathwa noma le-IP: 192.168.1.200 # Lapha sibonisa i-IP yethu I-XBMC
Igama lomsebenzisi: xbmc # Lapha sibeka igama lomsebenzisi ebesilikhethe ngaphambili
Iphasiwedi: xbmc # Lapha sibeka iphasiwedi esiyikhethile ngaphambili
Lapho sesiqedile ukungeza eyethu Bamba manje sesingakwazi ukuphatha i- I-XBMC kusuka ku-Android yethu.
Kuselula yami kunezilawuli eziningi kufayela le- Isilawuli kude se-XBMC lokho akuveli ngoba mancane. Kwiselula enesikrini esikhudlwana noma kuthebhulethi kuzobukeka kungcono kakhulu. Ngiyethemba uyithola ilusizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » XBMC eyihlane ye-Android
Sawubona, lesi sifundo sihle kakhulu.
Ngine-Media Center ene-XBMC ene-Gentoo Linux.
Uhlelo luhle kakhulu futhi ngiyakuthanda engikufundayo, kuphela ukuthi kukhona enye inketho njengesilawuli kude.
Lokhu ngicabanga ukuthi isicelo esisemthethweni, kepha futhi ngiyamxosha uYatse futhi kuphelele kunenguqulo esemthethweni.Ake sithi lolu hlelo lokusebenza lukude kanti olunye luyoba yi-smartremote.
UChuck Daniels kusho
Kade ngiyisebenzisa futhi kumnandi. Ungabona amabhanela ochungechunge kusuka kuselula / ithebhulethi, amaphosta ama-movie, amazwibela, njll. Akuyona nje irimothi ejwayelekile. Ungafaka okuqoshiwe kwalolu hlobo eposini i-Atr0m, ngokuqinisekile ukuthi ngaphezu kokukodwa kungena ngamehlo, hahahaha.
Phendula u-Chuck Daniels
Ngiyisebenzisa kuphela njengesilawuli kude, angidingi okungaphezulu. Noma kunjalo, okuthunyelwe kubhekiswe kakhulu ekufakweni nasekucushweni kunalokho okufanele kuphawule ngohlelo lokusebenza olukude lwe-XBMC. Siyabonga ngokuphawula !!
Kuhle kakhulu, kepha umbuzo, kuyadingeka yini ukubeka i-IP? Ngikutshela lokhu ngoba kunethiwekhi yami ngisebenzisa i-DHCP futhi ngenqaba ukusebenzisa ama-IP static.
Ngine-XBMC efakwe kumafoni, amaphilisi, ama-PC… ..
Ngiyabona awunawo amakheli we-MAC.
kunohlelo olungcono, olubizwa nge- yatse, lunezinkanyezi eziningi ukwedlula olusemthethweni esitolo sokudlala, futhi luthola idivayisi yakho
Ngabe uke wazama uYatse? Ngemuva kokuzama "ama-remotes" amaningana ngahlala noYatse.
Ngaphinda ngasebenzisa i-yatse ngonyaka odlule futhi ihamba phambili. Ngiphinde ngikhokhele inguqulo ye-premium futhi ngiyakwazi ukuthumela amafayela kusuka efonini. Kuphelele kakhulu. Ngingathanda ukwazi ukuthi uma unoYatse ungakwazi futhi ukulawula ipeni le-android? Thayipha mk809